Ogaden News Agency (ONA) – Xafladdii Xidhitaanka Shirwaynaha OYSU North America ee Seattle oo Wacdari Kadhacay.
Xafladdii Xidhitaanka Shirwaynaha OYSU North America ee Seattle oo Wacdari Kadhacay.
Seattle: Waxaa magalaada Seattle ee gobolka Washington lagu qabtay xafladdi xidhitaanka shirweynihii 5aad ee OYSU qaaradda Waqooyiga Mareykanka. Xafladdan ayaa waxaa kasoo qayb-galay shacab weynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Seattle iyo nawaaxigeeda sida Dhalinyarada, Hooyooyinka, Wax garadka iyo Aqoonyahanka.
Munaasabaddan ayaa waxaa furay guddoomiyaha Jaaliyadda Somalida Ogadenya ee Seattle Mudane Ali Mohamed Ahmed (Ali Yare) oo isagu soo dhoweyn kadib kahadlay xaaladda guud ee halganka Somalida Ogadenia. Mudane Ali Yare ayaa waxaa uu aad ula hadlay ummadda Soomaaliyeed kuna baraarujiyey iney ka dhiidhiyaan gumesiga madow ee geeska Africa kuna dadaalaan midnimadooda iyo iskaashiga.
Waxaa isna goobta ka hadlay afhayeenka OYSU Mudane Jabarti Ismail Baynax oo isagu ka hadlay isla markaan dad waynaha u sharaxay OYSU iyo waxa ay utaagan tahay. Waxaa kadib madasha lagu soo dhoweeye Mudane Shaafi Sheikh Abdi (Shaafi Shilaabo) oo isagu lawadaagay shacabka qodobadii kasoo baxay shirweynaha 5aad ee OYSU North America. Waxaa iyaduna shirka ka hadashay Huda Ahmed oo ah xog’hayaha OYSU San Diego oo khudbad runtii shacabka qiiragalisay goobta kasoo jeedisay.
Dhanka fanka iyo suugaanta ururka OYSU ayaa wacdarihii looga bartay goobta kamuujiyey soona bandhigay suugaan halgameedkii Soomaalidda Ogadenia. Waxaa gabay goobta kasoo jeedisay xubinka ugu da’da yar OYSU Seattle Xafsa Hassan Daahir oo runtii dadweynihii ay aad ula dheceen gabaygeeda.
Kooxda fanka iyo suugaanta ayaa soo bandhigay heeso iyo dhaantooyin cusub iyo waliba ruwaayad ay dadweynhiii aad ula dheceen. Waxaa goobta ka dhex muuqday qaar kamid ah fannaaniinta OYSU North America sida Ahmed Gurmad iyo boqorka dhaantada North America Gorgor Yusuf.
Isku soo wada duuboo xafladdan ayaa runtii ahayd mid magaalada Seattle gilgishay isla markaana si weyn ugu diirsadeen shacabka Somaliyeed ee magaalada Seattle kudhaqan.
Videoga munaasabadan ayaad mardhow warbaahinta ka daawan doontan haddii alle imdo.